Wizz Air inozivisa new base muLarnaca
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Wizz Air inozivisa new base muLarnaca
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cyprus Kupwanya Nhau • Hungary Kuputsa Nhau • Investments • nhau • vanhu • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Wizz Air yazivisa nhasi makumi maviri nesereth base muLarnaca. Ndege ichaisa ndege mbiri dzeAirbus A2 paLarnaca airport muna Chikunguru 320. Pamwe nekugadzwa kwenzvimbo nyowani, Wizz Air yakazivisa masevhisi gumi nemana matsva kunyika nomwe kubva kuLarnaca kutanga muna Chikunguru 2020.
Nhoroondo yaWizz Air muCyprus yakadzoka makore gumi apo ndege yekutanga yakasvika muna Zvita 2010. Iyo ndege yakatakura vanopfuura zviuru mazana masere kuenda nekubva kuCyprus muna 800. Larnaca ichava Wizz Air's 2019th hwaro. Sechikamu chekuwedzera kweWIZZ, nendege inoenderera nekuwedzera mashandiro ayo muCyprus ne60% uye inova mutungamiri wemusika.
Nzvimbo yekugadzwa muLarnaca ichagadzira anopfuura zana mabasa akananga nendege uye kunyange mamwe mabasa mumaindasitiri akabatana. Ndege mbiri dzeAirbus A100 dzinotsigira mashandiro emigwagwa mitsva gumi neimwe kuenda kuAthens, Thessaloniki, Billund, Copenhagen, Dortmund, Memmingen, Karlsruhe / Baden Baden, Salzburg, Suceava, Turku, Wroclaw inokwana zvigaro miriyoni imwe zviri kutengeswa kubva kuLarnaca muna 2. Wizz Air yakazara network inotsigira hupfumi hweCyprus pamwe nekubatanidza chitsuwa nenzvimbo nyowani dzinonakidza.
Wizz Air inzvimbo yekudyara chikwereti yakatarwa nendege, ine zvikepe zvevhareji zera remakore 5.4 zvinosanganisira yazvino inowanika zvakanyanya uye inochengetedza Airbus A320 neAirbus A320neo imwe yemhuri imwe yemahara ndege. Wizz Air's carbon-dioxide emissions yaive yakaderera pane ese eEuropean ndege muFY2019 (57.2 gr / km / mutakurwi). Wizz Air ine bhuku rakakura kwazvo rekuodha ndege mazana maviri nesere nesere dzendege dzemuchadenga Airbus A268neo mhuri iyo ichaita kuti ndege iyi iwedzere kudzikisira tsoka yezvakatipoteredza ne320% kune vese vanofamba kusvika 30.
Chiziviso chanhasi chinouya apo nguva nyowani yekushambidzwa kwekushambidzika inotangira paWizz Air. Iyo yendege nguva pfupi yadarika yakazivisa huwandu hwenhanho dzakatsigirwa dzehutsanana, kuve nechokwadi chehutano pamwe nekuchengetedzeka kwevatengi vayo nevashandi. Sechikamu chemitemo iyi mitsva, mukati mendege, vese vashandi vekabhini nevapfuuri vanofanirwa kupfeka masiki ekumeso, nevashandi vemakabhini vanodawo kupfeka magirovhosi. Ndege dzeWizz Air dzinowanzoiswa kuburikidza neindasitiri-inotungamira fogging maitiro nemushonga wehutachiona uye, zvichitevera hurongwa hwakaomarara hwekuchenesa hweWIZZ, nendege dzendege dzese dzinowedzerwa hutachiona husiku nemhinduro imwechete yeantiviral. Kuchenesa mapukuta kunopihwa kune mumwe nemumwe mutyairi paanopinda mundege, mumagazini epabhodhi abviswa mundege, uye chero chinhu chiri mukati mekutenga chinokurudzirwa kuti chiitwe nemubhadharo usingataurike. Vapfuuri vanokumbirwa kuti vatevedze matanho ekudzivirira emuviri akaunzwa nezviremera zvehutano zvemuno uye vanokurudzirwa kuti vatenge zvese zvisati zvaitika nendege online (semuenzaniso inotariswa mumikwende, WIZZ Kukoshesa, kukurumidza kuchengetedza nzira), kudzikamisa chero kusangana kupi nekupi kunovapo panhandare yendege.
Wizz Air ichatanga kuunganidza vechidiki uye vane chinzvimbo vavhoterwa panzvimbo yayo nyowani.
Achitaura pamusangano wevatori venhau muLarnaca nhasi, József Váradi, CEO weWizz Air Group ati: "Mushure memakore gumi ekubudirira mukushanda kuLarnaca International Airport, ndinofara kuzivisa nzvimbo yedu nyowani pano, sezvo tichiona kugona uye kudiwa kwe yakaderera mutengo kufamba muCyprus inova imwe yenzvimbo dzinozivikanwa uye dzichikurumidza kusimukira nzvimbo dzevashanyi. Isu takazvipira kusimudzira huvepo hwedu muCyprus, uye nekupa mikana inodhura yekufamba kuenda nekudzoka kuLarnaca, tichizvichengeta kusvika kumatanho epamusoro ezvirongwa zvedu zvekuchenesa. Yedu-ye-iyo-yehunyanzvi Airbus A320 neA321 neo nendege pamwe needu akasimudzirwa ekudzivirira matanho achavimbisa akanakisa mamiriro ehutsanana kune vafambi. Wizz Air ndiyo inodhura kwazvo inogadzira ine chinzvimbo chakasimba kwazvo muEurope inoshandisa ngarava diki uye dzakapfuma kwazvo dzendege dzine tsoka dzakadzika kwazvo. Ndichifunga izvi ndine chivimbo chekuti Wizz Air ichaita shanduko huru mukusimudzira hupfumi hweCyprus uye kuwedzera kweindasitiri yayo yekushanya. ”
VaYiannis Karousos, Gurukota rezvekutakurwa kwenyika, Communications & Works vakataura kuti: “Nguva yese iyi, zano redu rakanangana nekusimudzira nyika uye zuva rinotevera. Naizvozvo tinofara kuzivisa kuti kudzoreredzwa kwekubatana kweCyprus kwakatangwa nenzira dzakanakisa, sezvo zvichisanganiswa nekumisikidzwa kweimwe nendege yakakosha, Wizz Air, nendege dzinoenda kunzvimbo dzatisina kukwana kubatana kusvika nhasi, pamwe nezvakanakira hupfumi hwenyika yedu ”.
Amai Eleni Kaloyirou CEO weHermes Airports vakawedzera kuti: “Tiri kufara zvikuru kuzivisa nhasi kuvambwa kwenzvimbo itsva yeWizz Air paLarnaca Airport. Sarudzo yeCyprus senge 28th base yeWizz Air panguva yakakosha seiyi indasitiri yendege ivhoti huru yekuvimba kwatiri uye inosimbisa tarisiro yakapfuma yeCyprus senzvimbo yekuenda. Tine chivimbo chekuti kuburikidza nekuwedzera kwekudyidzana kwedu kune zvibereko isu tichawedzera zvakanyanya kubatana kweCyprus kunzvimbo dzatino tarisa zvine hungwaru kuwana zvirinani, nerubatsiro rwakakosha kune indasitiri yedu yekushanya pamwe nehupfumi hweCypriot zvachose ".